WFP oo kaarar cunto siineysa qoysas ku dhibaateysan Soomaaliya. - BBC News Somali
WFP oo kaarar cunto siineysa qoysas ku dhibaateysan Soomaaliya.
16 Maajo 2012
Barnaamijka Qaramada Midoobay ee cuntada aduunka WFP ayaa sheegay in ay kaarar ay cunto ku qaataan ay siinayaan deegaano ka tirsan Soomaalia si looga hortago in ganacsatada maxalliga ay lacago yar kaga iibsadaan cuntada la siiyo.
Waxaa qoyskii la siinayaa kaar 80 dollar ah bishiiba kuwaas oo ay suuqyada uga soo iibsan karaan cunooyin kala duwan sida bariis, saliida cuntada lagu karsado hilib, caano IWM.
Ilaa iyo iminka shan iyo toban kun oo ruux oo ku nool Waqooyi Galbeed Somaliland ayaa helay kaararka raashinka lagu qaadanyo sida ay sheegtay WFP.
Habkan kaararka lagu siinayo qoysaska ayaa waxa ay WFP u aragtaa mid u wanaagsan dadka danyarta ah ee nugul ,waxa sidoo kale uu dhiiraghalinayaa ganacstada yar yar si ay u kordhiyaan dakhligooda waxa sidaa yiri Madaxa WFP Somalia Stafano Parretti.